Israel: Kusvetuka kwakakosha mukuverenga antibody mushure me4th COVID-19 jab
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Israel: Kusvetuka kwakakosha mukuverenga antibody mushure me4th COVID-19 jab
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Israel Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kusimuka kwekuchinja kutsva kweCCIDID-19, senge Delta uye, nguva pfupi yadarika, Omicron akasiyana, anonzi akabatsira kudzora dziviriro yakapihwa nepfuti, zvichikurudzirawo nhare kuti dziburitse boosters, neIsrael ichitungamira mhosva seimwe yevatema. nyika dzekutanga kugovera mamwe madosi.
Achitaura zvekutanga bvunzo mhinduro, Israel Mutungamiriri wenyika, VaNaftali Bennett vakazivisa kuti yechina yekudzivirira yeCCIDID-19 "inogona" kureva "kuwedzera" mukudzivirira kubva kuhutachiona, kuchipatara uye nezviratidzo zvakakomba, vachiwedzera kuti vakuru vakuru vava kuziva "nechokwadi chepamusoro" booster dose ichave yakachengeteka kushandiswa kwakakura.
Panguva yemusangano nezuro wevatori venhau kuSheba Medical Center, kumabvazuva kweguta Tel Aviv, Bennet akaudza vatori venhau kuti chirongwa chechina chekudzivirira kwePfizer's coronavirus chakawedzera huwandu hwevashanu kune vatori vechikamu muchidzidzo chitsva cheIsrael, vachikurudzira kuti imwe pfuti ichabatsira kumutsidzira kusadzivirirwa.
"Tinoziva kuti svondo mushure mekupihwa kwechina, tinoona kuwedzera kashanu kwehuwandu hwemasoja ekudzivirira chirwere mumunhu akabaiwa," akadaro Bennett.
"Sezviri pachena, izvi zvicharatidza mwero wedziviriro wepamusoro pane pasina muyero wechina, zvine chekuita nehutachiona uye kupararira kwehutachiona uye zvine chekuita nekurwara kwakanyanya."
Kutongwa kwakatanga mukupera kwaZvita uye kwakaona vashandi zana nemakumi mashanu paSheba Medical Center vachiwana imwe inosimudzira. Kunyangwe vashandi vanga vatotora madosi matatu ePfizer-BioNTech jab, mazinga avo emasoja ekudzivirira chirwere akaonekwa achidzikira zvakanyanya mumwedzi mina kana kupfuura kubva pakusimudzira kwavo kwekupedzisira, zvichifambirana nehumwe humbowo hwekudzikira kwekudzivirira kwakapihwa nemishonga iripo.
Kusimuka kwekuchinja kutsva, senge Delta uye, nguva pfupi yadarika, Omicron akasiyana, anonzi akabatsira kudzikisira dziviriro yakapihwa nepfuti, zvichikurudzirawo kufona kuti vaburitse mabooster, neIsrael ichitungamira mhosva seimwe yenyika dzekutanga. govera mamwe madosi. Mushure memushandirapamwe wayo wekutanga wekusimudzira, Izirayeri nguva pfupi yadarika yakatanga kupa madosi echina kuvagari vane makore anopfuura makumi matanhatu, avo vane immune system yakakanganiswa, uye vashandi vekurapa, vachiita mutemo uyu kunyangwe mhedzisiro yemuyedzo isati yasvika.
Nekudaro, nepo kukurumidza kupararira kweOmicron strain yakonzera alarm pasirese - pamwe nefungu rezvirambidzo zvitsva, mirairo yekudzoka kumba uye kuvharika - zvakawanikwa zvekutanga zvinoratidza kuti musiyano unokonzera zviratidzo zvakapfava kupfuura shanduko dzakapfuura.
The World Health Organisation (WHO) akati humbowo hunogona kutsanangura "kudzoreredza" pakati pehuwandu hwehutachiona huri kukurumidza kukura uye hushoma hwekurapwa uye huwandu hwevanhu vanofa pasi rose, vachitoratidza kuti Omicron anogona kunge ari "nhau dzakanaka" kana zvimwe zvidzidzo zvikasimbisa izvo.